Lapan’ny Kolontsaina… : hiompana amin’ny fetin’ny reny ny GBM | NewsMada
Lapan’ny Kolontsaina… : hiompana amin’ny fetin’ny reny ny GBM
Hotanterahina ny 24 ka hatramin’ny 28 mey izao etsy amin’ny lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar, andiany faharoa amin’ity taona ity. Hiompana kokoa amin’ny fetin’ny reny ny tolotra raha ny fanazavan’ny orinasa Madavision mpikarakara ny hetsika.
Fotoana hanararaotan’ny mpianakavy miantsena ny fanomezana ho an’ireo renim-pianakaviana araka izany ireo efatra andro ireo. Manodidina ny 250 ny tranoheva handray anjara ary feno avokoa izy ireo amin’ity, hoy hatrany ny fanazavana. Hisy mpandray anjara vaovao maromaro hitondra ny vokatra amidiny ao.
Ny volana mey toy izao ihany koa no ivoahan’ireo lamaodin’ny ririnina ary hanaovana varo-boba ny lamaodin’ny lohataona ho an’ireo efa zatra ny hetsika La Grande Braderie de Madagascar.
Tsy hadino fa sehatra hanandratana ny orinasa malagasy ny GBM, ka amoahana ireo vokatra tena malagasy. Mivelatra amin’ny sokajin’entana maro izany vokatra izany, saingy mbola manana ny tanjany ny vokatra sakafo sy ny asa tanana.
Ifandrombahan’ny mpiantsena ny vokatra sakafo vita malagasy ao amin’ny GBM noho izy ireny tsy misy akora simika sy mahasalama.